တစ်ကောင်တည်းပဲ ဒါပေမဲ့ ခြင်္သေ့
ကျွန်မက သာမန်မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ သာမန်မိဘနှစ်ပါးကနေ မွေးဖွားလာပြီး သွေးနဲ့သားနဲ့ လူဖြစ်လာတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ပေါ့။ လူငယ်ဘဝမှာ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ နယ်ကျွံမိပြီး ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့တယ်လေ။ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ ခေါင်းပါးခဲ့တာလည်း ပါတာပေါ့.. ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်မကို သင်ပေးမယ့်သူလည်း မရှိခဲ့သလို စာဖတ်အားလည်းနည်းခဲ့တာကြောင့် ဘယ်ကနေ သင်ယူရမှန်းလည်း ကျွန်မမသိခဲ့ဘူးလေ.. တစ်ချို့ပညာပေးစာအုပ်တွေ ဖတ်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်း “ဟဲ့.. နင် ဒီစာအုုပ်တွေဖတ်နေရင် နင့်ကို မကောင်းတဲ့ မိန်းမလို့ ပြောကြလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့ စကားတွေထဲ နှစ်မြှုပ်ခဲ့ရင်း ကျွန်မမှာ ဘာဗဟုသုတမှ မရှိခဲ့တာကြောင့် ဒီလိုတွေ ကြုံလာရတာပေါ့… ကျွန်မကိုချစ်လှပါချည်ရဲ့ လက်ထပ်ပါ့မယ်ဆိုပြီး ကတိပေးထားတဲ့ ရည်းစားဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း ကိုယ်ဝန်ဆိုတဲ့အသံလည်းကြားရော ပြေးသွားလိုက်တာမှ အရိပ်တောင်မတွေ့ရတော့ဘူး။
ဒါနဲ့လေ လူတွေက သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်.. ဘာမှ မသိနားမလည်တဲ့ ဒီကလေးလေးကို ခေါ်စရာအဖေမရှိတော့တာနဲ့ ဖျက်ချပစ်တဲ့။ အို တာဝန်မယူတတ်တဲ့ အဲဒီသကောင့်သားကို အပြစ်မဖို့ကြဘဲ လူ့လောကထဲ ရောက်တောင် မရောက်လာသေးတဲ့၊ ဘာအပြစ်မှမရှိရှာတဲ့ ကျွန်မသွေးသားလေးကို ဖျက်ချခိုင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီကျက်သရေယုတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပါးစပ်ကိုလည်း ကျွန်မမပိတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကိုက ဖျက်ချခိုင်းနေလို့လေ။ အဲ့တော့ ကျွန်မဘာလုပ်ရမလဲ? ထွက်ပြေးရမယ်။ ဟုတ်တယ်။ အားလုံးနဲ့ဝေးရာကို ထွက်ပြေးရမယ်။ ကျွန်မဘယ်ကို ပြေးရမလဲ….
ရှင်တို့က ကျွန်မသတ်သေသွားမယ် ထင်တယ်ပေါ့? ဟင့်အင်း မသေနိုင်ပါဘူး။ ဒီကလေးကို လှလှပပမွေးပြီး ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း လှလှပပကို အသက်ရှင်ဦးမှာ။ အဲ့တော့ ကျွန်မလူတွေရဲ့ဝေးရာကိုမဟုတ်ဘဲ စိတ်တွေရဲ့အဝေးကို လျှောက်လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မဘေးနားမှာ လူမဟုတ်တဲ့ ဇွန်ဘီးတွေပဲ ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သူတို့ကဇွန်ဘီးတွေဆိုမှတော့ ‘ဒီဟာမပေါ့။ လက်မထပ်ခင် ဆတ်ဆော့ပြီး ခုတော့ ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ကျန်နေခဲ့တယ်’ ဆိုတာမျိုး ပြောမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ စဉ်းစားလို့မရတာကလေ.. ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း အပြစ်ရှိခဲ့တာလား? ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ကိစ္စ၊ ကိုယ်တာဝန်မယူဘဲ ယုတ်မာမိုက်ရိုင်းစွာ ကိုယ်လွတ်ရုန်းသွားတဲ့ ဒင်းမှာကရော ဘာအပြစ်မှ မရှိဘူးလား? သူ့ကို အပြစ်တင်တဲ့စကား ကျွန်မတကယ်ကို တစ်ခွန်းမှ မကြားဖူးခဲ့ဘူးလေ…
အိုခေ.. ကျွန်မကို ပြောမယ်ဆိုတော့လည်း ပြောပါစေ… ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်သွေးကိုယ့်သားကို ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီး မွေးထုတ်နိုင်တဲ့အထိ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတာရယ်၊ ကလေးတစ်ယောက်အမေဖြစ်တော့မှာမို့ ဝင့်ကြွားနိုင်တဲ့ သတ္တိကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာရယ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ်တယ်။ ဒီလို လောကကြီးကို မျက်နှာပြောင်တိုက် ရွဲ့စောင်းရင်း ကလေးလေးကို မွေးဖို့ဖွားဖို့အချိန် နီးလာရော။
အဲ.. နီးလာတဲ့အချိန်မှာလည်း ဒုက္ခကတော့ မသေးဘူးရယ်။ ကျွန်မအဖေနဲ့ အမေက ရှက်လွန်းလို့ဆိုပြီး ကျွန်မကို အိမ်ပေါ်မှာ မထားတော့ အဆောင်တစ်ခုမှာ စုထားဆောင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးနဲ့ သွားငှားနေရင်း မနည်းရုန်းကန်ရတယ်။ ကိုယ်ဝန်လမရင့်ခင်အထိ အလုပ်တွေလုပ်၊ လရင့်လာတော့လည်း အိမ်မှာယူလုပ်လို့ရတဲ့ အချိန်ထိလုပ်ရင်း ပိုက်ဆံရှာရတာပေါ့။ နေ့စေ့လစေ့နဲ့ မွေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့လည်း တစ်ယောက်တည်းမို့အားတော့ငယ်သား။ ဒါပေမဲ့ သမီးလေးမျက်နှာကြည့်ရင်း “ငါက တစ်ကောင်တည်းလည်း ခြင်္သေ့မဟဲ့” ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အားအသစ်တွေ ထပ်ဖြစ်လာပြန်ရော။
ကလေးမွေးပြီးတော့ အဲဒီဇွန်ဘီးတွေ ပါးစပ်ပိတ်သွားမယ်ထင်တာ။ နောက်တစ်မျိုးပြောကြတယ်လေ။ ‘လင်မရှိတဲ့ မယား မတင့်တယ်ဘူး’ ဆိုပဲ။ ဒီဗိုက်ကိုတောင် ကိုယ့်အားနဲ့ကိုယ် ရုန်းကန်ပြီး လူဖြစ်အောင်မွေးနိုင်သေးတာပဲ။ ပျိုးထောင်ဖို့ရော ဘာလို့မရုန်းကန်နိုင်ရမှာလဲ။ ကိုယ့်သမီးအပေါ် ကောင်းမယ်၊ ကိုယ့်ကို မေတ္တာသက်ဝင်မယ် ဆိုရင်လည်းအကောင်း၊ မဟုတ်ရင် တစ်ပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ပြီး ကျွန်မက နာဦးမယ်။ ဘယ်သူမှ ကြိုမသိနိုင်ဘူးလေ။ ကျွန်မမိဘတွေ၊ အမျိုးတွေဆိုသည်မှာလည်း တစ်လျှောက်လုံး အသံမထွက်ခဲ့သမျှ ပတ်ဝန်းကျင်က လင်လည်းထပ်ယူခိုင်းရော ချက်ချင်းသူတို့မှန်တယ်ဆိုပြီး အဆောင်ထိလာ အားပေးတိုက်တွန်းကြတာ။ (ကိုယ်တိုင်တောင် ရှာပေးမယ်ဆိုပဲ။) ချော့လိုက် ခြောက်လိုက်ပေါ့လေ။
ခက်တာက ကျွန်မကလည်း ငါးဖယ်မလေ။ ထုလေ ထုလေ မာလေ.. ခြောက်လေ။ ခြောက်စမ်း သန်းခေါင်ထက်ဘယ်ညဉ့်ကများ နက်နိုင်ဦးမှာလဲ? သူတို့ခမျာလည်း သနားစရာ သိပ်ကောင်းကြပါတယ်လေ။ သမီးလေးရဲ့ဘဝရှေ့ရေးကိုပါ ကျွန်မကိုယ်စား ခြောက်ခြားနေလိုုက်ကြတာ။ ကျွန်မကတော့ ရှင်းတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အားနဲ့ ဘယ်လမ်းအထိလျှောက်နိုင်တယ်၊ ကိုယ့်သားသမီးကိုလည်း ဘယ်ဘဝအထိ တွန်းပို့နိုင်လဲဆိုတာ ကျွန်မပြမယ်။ အချိန်တစ်ခုအထိစောင့်။ ကျွန်မရော၊ ဒီသမီးလေးရော ဘဝနှစ်ခုလုံး လုံးဝမတိမ်းစောင်းစေရဘူး လို့ကျွန်မအာမခံတယ် လို့ပြောတဲ့အခါ ကျွန်မဟာ လူ့ဘောင်လောကရဲ့ အပြင်ဘက်က ဇွန်ဘီးမဖြစ်သွားရောလေ။ (အမှန်တော့ ဒီဇွန်ဘီးဆိုတဲ့နာမည်က ကျွန်မသူတို့တွေကို တိတ်တိတ်လေးပေးထားတာ သူတို့မသိကြဘူး။)
ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ။ ကျွန်မ ဒီကလေးလေးကို လူမဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ သူ့အဖေလက်ထဲက ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ၊ ဦးနှောက်မရှိကြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လက်ထဲကလည်း ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးပြီ။ မတူညီတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုကို ကျွန်မဦးဆုံးလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ။ သမီးရေ.. ဒီလိုညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မေမေက အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်ကျင်လည်ခဲ့ရပေမဲ့ သမီးလေးကတော့ မွေးကင်းစကတည်းက အလိုလိုရုန်းထွက်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့ပြီနော်..
သမီးအတွက် ကမ္ဘာလေးကို ဒီထက်နယ်ပယ်ကျယ်သွားအောင် ဒီထက်ပိုပိုကောင်းအောင် ပြုပြင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင် ကျွန်မသင်ပေးရဦးမယ်။ သြော် ကျွန်မလျှောက်ရမယ့်ခရီးက အရှည်ကြီး ရှိနေသေးပါလား။ ကျွန်မ ဒီထက်သန်မာရဦးမှာပါလား။ ကျွန်မ ခြင်္သေ့အိုမကြီးဖြစ်တဲ့အထိ အသက်ရှည်ရှည်နဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာ နေဖို့ ကြိုးစားရဦးမှာပါလား…
Credit: Hnin Ei Oo ( For Her Myanmar )